Iphupho Elibi Legciwane Elisha? I-WTN Ibiza Igunya Lokugoma Lomhlaba Wonke kanye Nokulingana Ekusabalaliseni
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Wtn » Iphupho Elibi Legciwane Elisha? I-WTN Ibiza Igunya Lokugoma Lomhlaba Wonke kanye Nokulingana Ekusabalaliseni
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Health News • Human Rights • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Wtn
INingizimu Afrika isesimweni sokushaqeka nentukuthelo ngemuva kokutholakala kohlobo lwe-Omicron lwe-coronavirus.
Ngokuphazima kweso, imboni yezokuvakasha neyokuvakasha ibheke phambili ekukhanyeni okugqamile ekugcineni komhubhe, yabuyela emuva esikhathini sobumnyama imingcele ivaliwe, ukukhanselwa kwezindiza, kanye negciwane elingaziwa elisongela impilo yomphakathi kanye nokuziphilisa.
Namuhla, umhlaba ubhekene nenye inkinga yezempilo yomphakathi ngokutholwa kwe-Omicron yohlobo lwe-coronavirus olungaziwa kodwa okungenzeka lube yingozi kakhulu futhi oluyingozi kakhulu. I-strain yaqala eNingizimu Afrika, futhi itholakale endaweni eyodwa eHong Kong naseBelgium.
U-23.8% wabantu baseNingizimu Afrika ugonywe ngokugcwele, futhi ezingxenyeni eziningi ze-Afrika, lesi sibalo sitholakala ngedijithi eyodwa kuphela, akukho mgomo owanele otholakalayo.
Ezokuvakasha zidinga ubunye bomhlaba manje kunanini ngaphambili lapho izizwe zisiza khona izizwe ezikanye nazo.
UDkt. Peter Tarlow, uMongameli we-WTN, ukhumbuza umhlaba ukuthi wonke amazwe ahlanganyela le planethi encane futhi kufanele sisebenzisane ukuqeda i-COVID-19 yonke indawo emhlabeni.
Ukulwa ne-COVID akuwona umsebenzi wanoma yiliphi izwe elilodwa kuphela, kodwa owawo wonke amazwe nezindawo ezisebenzisanayo ngezempilo nomhlaba onokuthula.
UJurgen Steinmetz, uSihlalo we-WTN
USihlalo we-WTN uJuergen Steinmetz wengeze wathi: “Ukusatshalaliswa okulinganayo kwemigomo kuwo wonke amazwe kubalulekile. Masikhumbuze umhlaba: Akekho ophephile kuze kube yilapho wonke umuntu egonyiwe!”
Lokhu bekwaziwa kwasekuqaleni lapho uMongameli waseMelika uBiden esho nje ngemuva kokugcotshwa kwakhe, Akekho ophephile kuze kube yilapho wonke umuntu ephephile.
Ngokungalandeli imithetho yesayensi, izinhlobo eziningi zegciwane ezingalawuleki njenge-Omicron strain zingakhula kalula. Okuhlukile okunjalo ngolunye usuku kungase kugweme ukuvikela kwethu kwamanje kokugoma, kuphoqe umhlaba ukuthi uqale phansi.
Lena ingozi isintu esingeke futhi akumele siyisekele.
Ikakhulukazi, emazweni lapho umuthi wokugoma ungatholakali khona, usongo lokuvusa isimo esinjalo esibi kakhulu.
Isimo esithuthukayo eNingizimu Afrika manje sesihlukanisa amazwe ayi-8 ngobusuku obubodwa kwezokuvakasha nokuvakasha kwamanye amazwe futhi siphazamisa umnotho. Lokhu kufanele kusivuse sonke.
Ukuvala nje imingcele phakathi kwamazwe kuwukulungisa okwesikhashana nje. Lo mhlaba uxhumene, futhi igciwane alihloniphi imingcele. Ukhiye owaziwa esintwini ngalesi sikhathi umgomo.
Lokhu kufaka phakathi ukusatshalaliswa okubanzi nokuphelele okunethemba lokuthi kuzo zonke izindawo, ngaphandle kwenzuzo yezimali noma imingcele, ukuma kwezombusazwe, nezinye izizathu zasemhlabeni.
The Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba futhi idinga ukuxegiswa kwemithetho yelungelo lobunikazi kanye nezivumelwano zamazwe ngamazwe ukuze kuqinisekiswe ukutholakala okubanzi nokuphelele komgomo osebenza ngempumelelo yonke indawo.
Cuthbert Ncube, uSihlalo webhodi lezokuvakasha e-Afrika
I-World Tourism Network, njengozakwethu obalulekile we Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika (ATB), iyazwelana nabantu baseNingizimu ne-Afrika, futhi ikakhulukazi kubangani namalungu embonini yezokuvakasha nezokuvakasha.
USihlalo we-ATB uCuthbert Ncube uye waphumela obala ezindabeni zokusatshalaliswa komgomo ngokulinganayo kanye nokuxegiswa kwezidingo zelungelo lobunikazi ukuze kube lula lokhu.
Lesi simo sithatha ubuholi obungathi sína ngale kwezokuvakasha, futhi sonke sidinga ukuphusha futhi sisekele noma yiziphi izinyathelo eziqinisekisa lo mgomo womuntu wokutholakala komgomo.
Ubuholi obuphumelelayo obungenabugovu ku-UNWTO, i-WHO, kohulumeni, nasezimbonini ezibalulekile bubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili.
I-WTN isekela igunya lokugoma uma lisekelwa Iziphathimandla Zesayensi Nezempilo, kanye nalabo abakwazi ukuthola umgomo ngokuphepha.
Okuningi ku-World Tourism Network kanye nobulungu: www.wtn.travel